नरुने मन, नहाँस्ने मन | काव्यालय
नरुने मन्, नहाँस्ने मन | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
नरुने मन, नहाँस्ने मन
by अजित रुपाबुङ July 25, 2020
अस्तव्यस्त तन्ना र धुसा भएको पलङमाथि अर्धनग्न चौबिस वर्षीय नीरु घोप्टिएर रुँदै छिन् । कोठाको पल्लो कुनामा उसकी पाँच वर्षीय छोरी चम्पा त्रसित भएर लुगलुग काँप्दै कोचिएर बसेकी छिन ।
“भाउजु योपनि एक सहयोग हो, दाजु नहुँदा भाउजुको मर्म बुझेर सहयोग गरेको नि !”
देन्डुब दोर्जेले फुकालेका लुगाहरु एक एक लगाउँदै भन्यो । उसको मुहारमा एक किसिमको सन्तुष्टिको भाव झल्केको थियो । बक्खुको तुना कसी सकेपछि दोजाको माथिल्लो भाग पट्याउँदै देन्डुब दोर्जेले फेरि भन्यो ।
“फेरी आउँला भाउजु, आज त परिचय मात्र दिएको हुँ । कस्तो भयो ? रिभ्यु दिनु ल ।”
यति भनेर उनले आफ्नो लामो पाताङ टिप्यो र कम्मरमा बाँध्दै खित्त हाँसेर ढोका नढप्काई फुत्त निस्केर हिँड्यो ।
नीरु केही बोलिनन् । उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् । आज उनलाई आफ्नै घर सुरक्षित लागेन । हेरक प्रकोप टार्न उनी घरभित्र छिर्ने गर्थिन । उनलाई लाग्थ्यो, घर भरपर्दो सुरक्षित स्थान हो तर देण्डुब दोर्जेले हातपात गरेदेखि गलत लाग्न थाल्यो यो सोचाइ । यो घर यति भयानक लाग्न थल्यो कि उ तर्सी तर्सी बस्न बाध्य भइन् जब पहिला उनी यहि घरमा खुशीसाथ साधारणसँग बस्थिन् । जीवनमा पहिलोपटक यस्तो घटना घटेको थियो उसँग । बलात्कृत भएँ भनेर भन्न कहाँ जानु ? कारबारी, गाँउ बुढा, मण्डल सबै नेपाल गइसकेको थियो । राती अबेरसम्म ढिकी जाँतोको आवाज आउने गाउँ शुन्यप्राय थियो । जोङ्खाग जाने त उस्को हैसियात तै थिएन । देण्डुब गएपछि नीरु सुस्तरी उठिन् र फोहोर लागेको आफ्नो आङ पखालिन् । कपडा फेरेर छोरी चम्पालाई अंगालो हालेर फेरि बेस्सरी रोइन् । छोरीपनि रोइन ठूलठूलो आवाजमा ” बाबा बाबा” भनेर ।
नीरुको लोग्ने छब्बिस बर्षीय धने बराल हराएको करीब छ महिना भइसकेको थियो । १९९१ को दशैँको एक हप्तािघी बजार भर्न गएको उनी अझै फर्केको छैन । त्यो बेला देशमा आन्दोलन चर्किँदै थियो । आजसम्म कसैले भेटेँ-देखेँ भनेका छैनन् । त्यो दिन धने घरबाट निस्किँदाको दृश्य अझै नीरुको आँखामा झल्झली आउँछ । बिहानै धने निस्किँदा चम्पा दलानमा खेल्दै थिइन् । नीरु र धनेको योजना त्यो दशैँमा लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पलसँगै एक रेडियो पनि किन्ने थियो । घरबाट निस्केर धने बारीको अन्तिम पाटामा पुग्दा नीरुले भनिन् ।
” उज्यालैमा फर्किनु, आन्दोलन यतै आइपुगी सक्यो रे ।”
“ल ल “
धनेले नीरुलाई नहेरी उत्तर दिदै लुरु लुरु ओह्रालो लाग्यो । त्यही बखत चम्पा दलानबाटै कराइ ।
“बाबा मलाई राम्रो जामा ल्याइ दिनु ल ।”
यो बेला भने धनेले उज्ज्यालो मुहार छोरी तर्फ फर्काएर भन्यो ।
” ल छोरी, तिम्रो जामा पहिला किन्छु है, ज्ञानी भएर बस्नु ।”
त्यसपछि धनेको पुरानो ढाका टोपी ओढेको शिर बिलिन भएर गयो ।
यहि थियो नीरु र चम्पाले धनेको अन्तिम पटक मुहार देखेको । त्यसपछि उनी घर फर्केको छैन । मरे-बाँचेको कुनै खबर छैन । कतिले भन्छन् चेम्गाङ जेलतिर कोचेका होलान्, कतिले भन्छन् तँलाई छाडेर नेपाल गए, कतिले भन्छन् अर्कै केटी भगाए । तर नीरुलाई भने धने फर्की आउने कुरामा धेरै विश्वास हुन्थ्यो । धने हराएदेखि हरेक जसो सपनामा उनी धनेसंगै हुन थालेकी थिई । एक किसिमले उनलाई सपना कहिल्यै नटुटोस्झैं लाग्थ्यो ।
रातमा हुरीले दैलो खटखट गरेर धकेल्दा प्रत्येक पटक धने आयो कि ? भनेर धिप्री बाल्थिन् । हरेक बिहान धने सकुशल फिरोस् भनी कामाना गर्दै तुलसी र सूर्यलाई जल चढाउँथिन् । तुलसीको मठ नेर भएको पारिजातको बोटले रात भरमा झारेको फूल बटुलेर घरमाथिको चौतारीमा भएको वर-पिपलको फेदमा उसको र धनेको नामको आकारमा सजाएर छाड्थिन् ।
आज नीरुले कठोर निर्णय गरिन् ।आनन्द मिल्दैन भने जस्तै प्रिय स्थानमा बसेर पनि के गर्नु ? नीरुको माइती तीन महिनाअघि नेपाल गइसकेको थियो । उनी त धनेलाई पर्खेर बसेकी थिइन् । धनेसँग छलफल गरेर निर्णय गर्न । आखिर धनेको पनि सबै आफन्ती करीब पाँच महिनाअघि नेपाल गइसकेका थिए । धेरै बेर घोरिएपछि नीरुले देश छाड्न उचित ठानी । मर्माहत तन मन ब्वाँसाहरूलाई बाड्न भन्दा देश छाड्न जाती ! उनले मन बनाइन् । उनले चम्पातिर हेरिन्, कति कल्कलाउँदी छे उनी । सम्झी, छोरीलाई मलाई जस्तो बज्रपात नपरोस्, उसको मुहारमा मुस्कान कति सुहाउँछ ? त्यो मुस्कान नखोसियोस्, देण्डुबले मसँग जे गरेको उनले देखी, त्यो कुरा नबुझोस् । यति सम्झेर उनले पहाडे कागजमा धनेलाई सम्बोधन गरेर एउटा चिट्ठी लेखी ।
तिमी जहाँ भएपनि घर आउनी । मलाई ठूलो आपत परेको छ । म तिमीलाई मात्र भेटेपछि भन्छु । तिमीले जे भन्छौ, त्यती बेलै म मेरो जिन्दगीको निर्णय लिनेछु । म त कुर्दै थिएँ, तिमी आइपुगेनौ । तिम्रो बाबा, आमा सबै परिवार नेपाल गइसके । मेरोपनि माइती नेपाल गइसके । मलाई गाउँमा हुँदापनि सुन्सान मरुभुमिमा छु जस्तो लाग्छ । तलको पुच्छर घरे मगर जो थियो, हिजो भालेको डाँकमा नेपाल गएछ । वल्लो गाउँ, पल्लो गाउँ सबै पतालिँदैछ । हाम्रो गाउँ त पूरै खाली भइसक्यो । मेरो नजिक भनेको चम्पा र काले कुकुर मात्र छ । कति गाउँलेहरुलाई जेल हालेका छन् । खै, आतङ्ककारी भन्छन् के भन्या हुन्, बुझेकी छैन ! बस्नै नसक्ने भएर मपनि नेपाल जाँदैछु । मैले पाँच हजार जति जोगाएकी छु, थप थाप पारेर नेपालामा जग्गा किनेर घर बनाउनु पर्छ । चम्पालाई राम्रो स्कूलमा पढाउनु पर्छ । तिमी आयौ भने घरमा सक भर नबस्नु । तिमी गएको महिनापछि आन्दोलनले गाउँ खरानी बनायो ।
एउटा कुरा, क्या त आइते वाइबा, बलेको छोरा थियो नि उनलाई त बिचरा, तिहारकै छेकोमा खेत जोत्दै गर्दा गोली हानेर मारेछन् । एउटै मात्र छोरो कस्तो रुँदै रुँदै नेपाल गए नि बले बाजे, कठै ।
लु, हाल यस्तै छ । यो चिट्ठी भेट्नासाथ तिमी घुमाउनेको बाटो हुँदै नेपाल आउनु । अहिले यति लेख्न पाएँ । अरु नेपालमै भेट भएर कुरा गरौँला ।
चिट्ठी लेखी सकेर नीरुले दोह्रोर्याएर पढिन् अनि दैलोको ठिक माथि बलोमा घुसारिन् जहाँ सधैँ धनेले खाकीको कोट झुन्ड्याउँथ्यो । नीरुलाई लाग्यो कोट झुन्ड्याउँदा चिट्ठी अवश्य भेट्नेछ ।
आज अन्तिम दिन । नीरुले आफ्नो जमिनको सिमाना घुमेर हेरिन् । चम्पा घरी हिँड्थिन् घरी नीरुको बुइ चड्थिन् । टाँकी, चिउरी, खन्यू, आदि खुब पौलिएको थियो । बाँस्तोला बाबैसँग जोडिएको सिमानामा साल्फोस्रेको बोट उस्तै मौलाएको थियो । ती घाँसहरू हेरेर नीरु खुब चुकचुकाइन् । धान रोपेर तिरिरिरी हरियो हुने महिना असारमा खेतहरु प्राय बाँझै थियो । पारी बस्तीहरूमा केही हरियाली थियो खेतबारीको । पर ढल्के रुखनेर धारा थियो । नीरु त्यता गइन् । धारा निरन्तर बगिरहेको थियो धरर्र…. । नीरुले एक अञ्जुली पानी पिइन् । छेवैको मलेताको बोटबाट पात टिपेर हातले दोबारेर दुनो बनाई र चम्पालाई पनि पानी पिलाई । यो भन्दा धेरै घुम्नु उनलाई डर थियो । भेटघाट गर्नु छिमेकपनि छैनन् । माथि ड्रुक्पा बस्ती छ लेकमा । उनलाई उति चिन्दैनन त्यता । पहिलाजस्तो समय अनुकूल पनि छैन । दिनपनि आधा जाँदै थियो । लागिन् उनी आज एकै दिनको घरतर्फ, सामाल तुमाल मिलाउन ।
हप्ता दिन पुग्ने चामल,डाल्डाको बट्टामा खाने तेल, एक थान डब्बि, सानो हलुङ्गेको कराइ, गुन्द्रुक सिन्की एक एक पोका, सोपीको बोतलमा किरासिन तेल, टीनको धिप्री र सलेदो, एक पोका नुन, सुकाको खुर्सानी, दुई थान हलुङ्गेको थाल, फेर फारे लत्ता कपडा आदि र धनेको बोक्न सक्ने सामानहरु ।त्यसपछि बाहिर गएर घर पछडि जाँतोलाई इस्कुसको झ्याङमुनि गाडिन् ।अरु सामान भने त्यत्तिकै छाडिन् । बिहान भाले बास्नै लाग्दा उठिन् । खोरमा भएको एक दुईवटा कुखुराहरु छाडी दिइन् । चौपाया थिएनन् । आन्दोलन चर्केपछि लेकतिरको गिद्दहरुले खाइसकेका थिए । हल गोरु, दुहुनो गाइ, कोरली सब सब ! कुनै लुटेर खाए कुनै चोरेर खाए । सामानहरू थुन्चेमा राखेर त्यसमाथि निदाएकी चम्पालाई राखिन् र धुसा ओढाइदिइन् । अनि थुन्चे बोकेर तुलसीलाई जल चढाइन् । त्यसपछि उनका पाइलाहरू अघि बढ्न थाले आफू नजन्मेको, नपुगेको, नदेखेको देशतिर । आफ्नै देश सम्झेर नेपालतिर । उसको पछिपछि काले कुकुरले पनि पाइला पछ्याउन थाल्यो ।
सानो त्रिपाललाई बिच नेर साढे छ फिट जतिको घोचाले तोक्चे लगाएर अड्याएको छ । वरिपरि छेउहरु ढुङ्गाले थिचिएको छ । एक छेउबाट भित्र छिर्न खुल्ला राखिएको छ । भित्र पानी नपसोस् भनेर वरिपरि बलेसी काटिएको छ । ढुङ्गाको तीन चुला, नीरु, चम्पा, काले कुकुर र सामाल तुमाल त्यहिभित्र कोचिएर बसेका छन् । पानी सिम सिम परिरहेको छ । नीरुको जस्तै त्रिपाले घर त्यहाँ हजारौं देखिन्छ ।
बेलुकीको पौने चार बजेको छ । चम्पा हैजाले सिकिस्त छिन् । ज्वरो, सेतो मासी, खोकी, दमजस्त बिरामले कँज्याएको छ । नीरु खोले भात पकाउँदै छिन् । काले कुकुर चम्पाको छेउमा गुडुल्किएर बसेको छ । असारे झरी रोकिएको छैन । भोलि नेपाल जाने बस आउने भएको छ । पैसा उठाएर रिजर्भ गरेका छन् । नीरुले पनि पल्लो गाउँको आफन्तसँग मिलेर रिजर्भ गरेकी छिन् । जो घुमाउनेमा केही दिनअघि भेट भएको थियो । आज अलिक छिटो सुत्नु छ ।चम्पालाई केही बिसेक भएको छ । सुत्न लाग्दा चम्पा मसिनो स्वारमा बोली ।
“बाबाले जामा कहिले लिएर आउँछ ?”
नीरुको गिदी शुन्य भयो, मुटुमा चप चप आरो घोपेझैं भयो । मन भक्कानियो । केही बोल्नै सकिनन् । उनीसँग छोरीलाई दिने न उत्तर थियो न बिरामी छोरीलाई झुट बोल्न सक्थिन् । केहीबेर टोलाइसकेर नीरुले चम्पालाई भुलाउन थालिन्, एकादेशको टुहुरीको कथा भनेर । चम्पा सुस्तरी निदाइन् । दिनभरि काम गरेर गलेकी नीरु पनि झकाइन् ।
बिहान हुनै लाग्दा नीरुलाई हातमा अनौठो स्पर्श भयो । उनी ब्युँझिन् र धिप्री बालिन् । उनले देखिन्, चम्पा नाक-मुखबाट रगात र फिँज निकालेर हात खुट्टा बजार्दै थिइन् । छटपटाउँदै थिइन् । ठूल्ठूला श्वास फेर्दै थिइन् । नीरुले चम्पालाई झट्ट काखमा उठाइन् र पानी छर्कँदै “चम्पा चम्पा !नानी नानी !” भनिन् । त्यसै बेला त्रिपालको खुल्ला दैलोबाट छिरेको एक झोँका हावाले धिप्री झ्याप्प निभाइदियो । धिप्रीको प्रकाश गएसँगै चम्पाको शरीर जोडजोडले काँप्न थाल्यो, थरर्र…. र सदाको लागि चलमलाउन छाड्यो । नीरु चम्पालाई अङ्गालो हालेर जोड जोडले रुन थालिन् । उनको चित्कार सुनेर सबै नजिक भएकाहरु “के भयो” भन्दै दौडिएर आए । नीरु चम्पाको निर्जीव शरीरलाई आङ्गालोमा कसेर लडिबुडी गरिरहेकी थिइन् । कतिले नीरुलाई सम्हाल्न थाले कतिले लासलाई वन लैजान तयार गर्न थाले । किन कि सबैलाई एकदम हतार थियो । रिजर्भ गरिएको बस बिहानको नौ बजे आउने कुरा थियो ।महिलाहरु जो जो नीरुलाई सम्हाल्दै थिए, उनीहरु आफैपनि रोइरहेका थिए । किन कि, त्यहाँमध्य धेरैको एक-दुई सन्तान त्यसरी नै बितिसकेका थिए, त्यो छोटो बसाइँभरमै ।
चम्पालाई दफन गर्न नीरु जानै सकिनन् । उनी पुरा विक्षिप्त थिइन् । बिहान सात बज्न लाग्दा चम्पाको शरीर दफन गरेर मलामीहरु फर्के । नीरुको सामानको पोका सबै मिलेर कसिदिए । धेरैले नीरुलाई आफूलाई आइपरेको पीडाको कथा भनेर सान्तवना दिए । त्यो दुखको घडीमा आफ्नै परिवार भएको आभाष दिलाए नीरुलाई सबैले । बसहरु लस्कर लागेर आए । सबै धमाधम बस चढ्न थाले । कोही हुडमा सामान लोड गर्न थाले । नीरुलाई डोहोराएर बससम्म लगियो । अघिल्लो भागको सिसामा “ॐ साइ राम” लेखिएको बसमा अर्ध चेतमा भएकी नीरुलाई चढाइयो । बान्ता नहोस् भनेर उनलाई फ्रन्ट सिटको झ्याल पट्टी राखियो । उनलाई सहयोग गर्न एक बहिनी छेउमा बसेकी थिइन् जो उनको आफन्त पर्थी। बस गुड्न थाल्यो । नीरु बेजोडसँग रुदै थिइन् । नयन बन्द थिए । केही समयपछि बसले हर्न बजायो । नीरुले आधा नयन खोली । बसको ब्लैन्ड्स्पट चेक गर्ने ऐनामा देखिन्, काले कुकुरपनि बसको पछिपछि जोडले दौडँदै आउँदै थियो । नीरु केही भुलेर काले कुकुर हेर्दै थिइन्, बसले ठूलो घुम्ती मोड्यो अनि काले कुकुर पनि सदाको लागी ओझेल परेर गयो ।
आज पन्ध्र वर्ष भयो नीरु नेपाल आएको । लहरै छाप्राहरु छन् उस्तै देखिने । त्यस भित्र बस्छन् उस्तै पिडा बोकेका मान्छेहरु । आज बिहान पानी थाप्न जर्किन लाइन लगाएर फर्किँदै थिइन्, नेपालमै जन्मेका भुराहरुको बिचमा मुढामा बसेर के के देखाउँदै थिए छिमेकी मकरध्वज सुब्बा । भुराहरु कराउँदै थिए “ओइ, ड्याङ्गै गोली हानेर मारेछ ! यता हेर त च्वाट्टै काटेर मारेछ, अबुई चुप्पिले कति ठाउँ घोपेर मारेछ” आदि आदि । के रहेछ भनेर नीरुले भुराहरुको पछडिबाट बिचमा हेरी ।
भुटानमा आन्दोलन हुँदा १९९१-१९९२ तिर भएको विभिन्न घटनाक्रमको फोटोहरु छापिएको एक म्यागाजिन रहेछ ।म्यागाजिनको नाम उनलाई थाहा भएन । फोटोहरु हेर्दै गइन् जहाँ विभत्स लासहरू थिए । नीरु अचानक झस्किन् पृष्ठ १३ को फोटो देखेर । म्यागाजिन हातमा लिएर नियालेर हेरिन् । त्यहाँ धने उत्तानो परेर लडेको थियो । पछाडिबाट कसैले गोली हानेको थियो । गोलीले उसको देब्रे भाग छाति पूरै उछिट्याएर लगेको थियो । प्राण त्याग्न छेउ-छाउमा भएको तितेपातिका बुटाहरु उखेलेर /माडेर सङ्घर्ष गरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो ।पुरानो ढाका टोपी शिरबाट झरेको थिएन । खाकीको कोटको देब्रे गोजीबाट आधा कागज निस्केको थियो । कागजमा लेखेको प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
१) चम्पालाई कुसुमे जामा र प्याँक प्याँक बज्ने जुत्ता
२)चम्पाकी आमालाई कैचेमार सारी र स्याण्डल्
३) एक थान फिलिप रेडियो
अरु भाग गोजीले छलेको थियो । यो उनले दशैमा किनमेलको लागि बनाएको तालिका हो भनेर बुझ्न गार्हो पर्दैन थियो । फुच्चे फुच्चे कुसुमे जामा समातेर धनेले देब्रे हात जमिनदेखि माथि उठाएको थियो । जामाको छातीको देब्रे भागमा मझौला रगतको थोप्लो लागेको थियो । लाग्थ्यो, यो उनले अन्तिम पटक प्यारी छोरीलाई गरेको चुम्बन हो, आङ्गालोमा बाँधेर मागेको बिदाइ हो । लासको मिटर पर ५ रुपैयाँको नोट थियो, जसमा भएको राजाको मुकुट देखि चिउडोसम्म रगतले छपक्क भिजेको थियो । लासको तल दाहिने पट्टी “एक आताङ्ककारी” लेखिएको थियो । हो, उनी उबेला सरकारले घोषणा गरेको आतङ्ककारीजस्तै नै देखिन्थ्यो, हुलियाले । शिरमा ढाका टोपी, ज्यानमा दौरा सुरुवाल, खाकीको कोट, मुहारमा एक-दुई दिनदेखि नखौरेको झुसे दाह्री जुङ्गा, कम्मरमा पटुका बाँधेको, पटुकामा गोठाले बुदुने खुकुरी घुसारेको,अनि खुट्टामा टायरबाट बनेको एक जोर फ्याङ्टा । यस्तै थियो उस्को हुलिया । हेर्दा बुझिन्थ्यो उ सौदा गरेर फर्कँदै गर्दा मारिएका हुन् । तर कुसुमे जामा बाहेक केही सामान थिएन त्यहाँ । लुटेर लगे होलान् वा क्यामेराको फ्रेममा अटेन होलान् ।
” चिन्छौ कि क्या हो बहिनी ?”
निकै बेर घोरिएर हेरेको देखेर मकर ध्वाज सुब्बाले सोध्यो ।
नीरु झस्किन् । चिन्दिन भनुँ भने मुटुको राजकुमारको लास थियो, चिन्छु भन्नपनि उसको अधर डराइरहेको थियो । नीरुले “ए” भनेर बेतुकले फिस्स हाँसिन् र म्यागाजिन सुब्बालाई नै फिर्ता दिइन् । अनि, छिटो छिटो छाप्रोतर्फ लागिन् । भुराहरु फेरि अरु पाना पल्टाउँदै कराउन थाले ।
छाप्रोमा पुग्दा उस्को मुटु बेजोड्ले धड्किरहेको थियो । श्वास फुलेको थियो । उस्को मुटुमा धेरै अघि गाँठो परेको कुरा आज फ्वास्स फुस्केर गयो ।आजबाट उनले कुमकुम सिन्दुरको बट्टा सदाको लागि बन्द गरिन् । सादा कपडाहरु लगाउन थालिन् । पहिला जस्तो भावुक भएर रोइनन् यसपटक । न हार गुहार नै मागिन् । अचेल त उनी पिडाहरुको पिटाइ खाएर इस्पात जस्तै कठोर भएकी छिन् । रित्तिएर खोक्री भइसकेकी उनीभित्र केवल एक चिज छ, एउटा नरुने र नहाँस्ने मन !